Posted by တန်ခူး at 12:36 PM
ဇတ်လမ်းလေးကကြေကွဲဖွယ်ကောင်းလွန်းလို့ဘာစကားမှထွက်မလာတော့ဘူး အစ်မရာ ၀ဋ်ကျွတ်သွားတယ်လို့ ပဲပြောရမလားး ..ကောင်းရာမွန်ရာ ဘ၀ရောက်ပါစေလို့ ထပ်တူဆုတောင်းပါတယ် ...ဘ၀တွေကဆိုးလိုက်တား(
အမရေ ... အဲလိုဘ၀တွေဖြစ်နေတာ ဘယ်သူ့ ကို အပြစ်တင်ရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးရဖန်များလာတော့ ၊ ခုတော့ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ပဲ ကူညီတော့မယ်ဆိုတဲ့ အဖြေတခုကိုပဲ ရှာတွေ့ လိုက်တော့တယ် ။
ဇော်ဇော် ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်တယ် ။
ဒါပေမယ့် တကယ် စဉ်းစားမိရင် သူ အသေဖြောင့်မှာ မဟုတ် ။ သူ့ ညီမလေးကို တယောက်တည်း လူ့ ဘ၀မှာ ထားခဲ့ရတာတွက် ။ သူ့ ညီမလေးကို ဆက်သွယ်နိုင်မလား အမ ။
ဇော်၂့အတွက် ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၊ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူ့ ညီမလေးအတွက် ကျမတို့ တခုခု လုပ်ပေးနိုင်မယ် ထင်တယ် ။
မရေမတွက်နိုင်သော အဖြစ်တွေ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်လောက်ကထည်းက ကျွန်တော်တို့ အညာမြို့က လက်လုပ်လက်စား မိသားစုထဲမှာ နေမကောင်းဖြစ် အိပ်ယာထဲလဲတာနဲ့ သိပ်မကြာမှာပဲ ဆုံးပါးသွားပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဆရာဝန်ပြဖို့ ပိုက်ဆံမရှိတာနဲ့ တနေ့လုပ်စာတနေ့စားရတယ်လူတွေဆိုတော့ လူမမာဖြစ်တာနဲ့ အာဟာဖြစ်လို့ အစာစားဖို့ ပိုက်ဆံမရှိကြတော့လို့ပါပဲ။
ဂျစ်တူးပြောသလို အကုန်လုံးလုပ်မပေးနိုင်တော့ တနိုင်လေးကူညီရတာပေါ့။
ဖတ်ရင်း စိတ်မကောင်းလိုက်တာ.. အဲလိုဘ၀မျိုးတွေ.. ဘယ်လောက်တောင်များနေပီလဲ...
မြတ်နိုးဆိုလဲ တခါတုန်းက ဆေးရုံပြချိန်မှာ ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးစာရွက်တွေကို ကြည့်ပီး... ဘယ်၂ယောက်များ ဆေးရုံမှာ ဆေးမ၀ယ်နိုင်တဲ့သူတွေ ရှိနေပီလဲ မသိဘူးလို့ တွေးမိတယ်။
အဲဒီလို အိမ်လို့ မခေါ်နိုင်တဲ့ အိမ်တွေကို လဲ မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ဖူးတယ် မ၀င်ရဲလို့ မ၀င်ခဲ့မိဘူး...အဲဒီအချိန်တုန်းက မြတ်နိုးရဲ့ ၀င်ငွေအကုန်လုံးနီးပါးကို အဲဒီလူတွေ အတွက် အမြဲ ချွေနေမိတယ်..။ အမရယ်.. ဆင်း၇ဲလို့ ငတ်သေသလို ကုစရာဆေးဖိုးမရှိလို့ သေသွားရတဲ့လူတွေ များနေပါပီ..။
တကယ်ဆို တီဗွီက ဆေးစားဆေးထိုး ၆ လနဲ့ ပျောက်ပါတယ်..။ ဟင်းးးးး
ဇော်ဇော်ဆိုတဲ့ မောင်လေး နောင်ဘ၀ဆိုတာ ရှိခဲ့ရင်... မြန်မာပြည်လိုနေရာမျိုးနဲ့ တခြားဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လူမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..။
အာ...တော်တော်လေးကု ကောင်းတာပဲ အမရယ်..စာအရေးအသား အရမ်းကောင်းတယ် ခင်ဗျာ . အားပေးနေပါ့မယ်။
ရွက်စိမ်းဖန့် ဖန့် 
အဲဒီရွက်စိမ်းလေးတွေက ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် ပန်းဥယျာဉ်ကို တင့်တယ်စေမယ့် ရွက်စိမ်းလေးတွေ။ အဲဒီရွက်စိမ်းလေးတွေကို ပန်းကောင်းအညွန့်ချိုးသလို အချိုးခံလိုက်ရ။ ဘယ်သူချိုးသလဲ….ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ခဲ့မိရင်….
အချိုးမခံရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ခဲ့မိရင်….
အဲသည်လို အမျိုးမှန်တဲ့ အပင်လေးတွေ ရှင်သန်နိုင်အောင် ဘယ်လိုမျိုးစေ့ချပေးကြမလဲ လို့ စဉ်းစားကြည့်ခဲ့မိရင်……..
မရေ.. ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး.. ငါ့မောင်လေးသာ ဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့.. မျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်... ကောင်းမွန်ရာ ဘုံဘ၀သို့ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
အနာသိသော်လည်း ဆေးမရှိသရွေ့ ဇော်ဇော်တွေအများကြီး ကြွေကြရဦးမယ်။
ဇော်ဇော်တွေအတွက် တို့တတွေ ပိုကြိုးစားကြ၊ ပိုညီညွတ်ကြစို့။
ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဲဒီလို ရွက်စိမ်းလေးတွေ ဘယ်လောက်များကြွေခဲ့ပြီလဲ။ ကြွေဦးမှာလဲ။ ရင်ထဲက မေးခွန်းပေါင်းများစွာကတော့ အဖြေမဲ့။
တကယ်ပါပဲ ကိုယ်တွေမသိလိုက်တဲ့ ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ ဘယ်လောက်တောင် များနေပြီလဲ
အမ တန်ခူးရေ ထပ်တူဝမ်းနည်းမိပါတယ်။
ဖတ်ရတာ တစ်ကယ်ဘဲ ၀မ်းနည်းမိပါတယ်။
ဖတ်ပြီးတော့ အဖြေမရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ အများကြီး ရင်ထဲကို တိုးဝှေ့ ဝင်ရောက်...။
တန်ခူးရဲ့ ရေးဟန်ထဲမှာ အခုလို ပို့စ်ကို ကျနော်တော့ ပထမဆုံး ဖတ်မိတယ် ပြောရမလားဘဲ။ စာဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းတော်တော်ဖြစ်မိတယ်။ နောက်ထပ် ဇော်ဇော်တွေ ထပ်မပေါ်ကြပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်းရတော့မှာပဲ။
မြန်မာပြည်မှာ ငတ်လို့သေတဲ့မသာ မရှိဘူးလို့ တချို့က ပြောကြတယ်။ ဆင်းရဲတာလည်း သေတတ်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ကြဖို့ ကောင်းပါပြီဗျာ။
ဟုတ်တယ်မောင်မျိုးရေ… ကံဆိုးသူသွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာဆိုသလိုပေါ့…
သူ့ူညီမလေးကို ဆက်သွယ်ခိုင်းထားပါတယ် ဂျစ်ရေ…
တနိုင်လေးတွေလုပ်ရင်း လူ့ အသက်ပေါင်းများစွာ ကူညီကြပါစို့ပီတိရေ… ခုလို လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ… နောင်လဲ လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
မြတ်နိုးရေ… တို့ ညီမက ဆင်းရဲသားဆေးရုံမှာ လုပ်တော့ အဲဒီလို သတင်းတွေ ခဏခဏကြားရတယ်...
ခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူးပါကိုစွမ်းရေ… နောင်လဲ လာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
ကောင်မလေးရေ… စိမ်းဝါမရွေး ကြွေတာတွေ ဝေးစေဖို့ဝိုင်းဝန်းအားထုတ်ကြပါစို့ နော်…
သိပ်နှမျောစရာကောင်းတဲ့ ရွက်စိမ်းလေးတွေပါ ကောင်းကင်ကိုရေ…
ဟုတ်တယ် နုရေ… တို့ က မောင်နှမလို သံယောဇဉ်ရှိတော့ ကြားရတဲ့ညက အိပ်လို့ တောင် မပျော်ဘူး….
အနာသိ၍ ဆေးအမြန်ရှိသောနေ့ ကို အမြန်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ် ပန်ရေ…
ဇော်ဇော်တွေကို အတူကယ်တင်ကြပါစို့ မ ရေ….
လင်းရေ… မတွေ့ တာကြာပြီနော်… တကယ်တော့ ဒါမျိုးအဖြစ်တွေ အများကြီးပါလင်းရေ…
မဇနိရေ… အပူတွေ ဝေမျှမိသွားတယ်….
ဒါကြောင့် တို့ အမျိုးသားက ပြောတာ… ဒီပို့ စ်လေးတင်မယ်ဆိုတော့ အပူတွေ ဝေမျှဦးမလို့ လားတဲ့သက်ဝေ…
တို့ လဲ ငိုခဲ့ရပါတယ် ရွာသားလေးရေ…
ကိုစေးထူးဆိုလိုချင်တာ ကျွန်မသဘောပေါက်တယ်… ဒီတခါတော့ ရင်ထဲ အတော်စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ ပါ…
ဆင်းရဲလို့ သေရတယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်ကြီးက ဘယ်လောက်များ လက်လွတ်စပယ်နိုင်လိုက်ပါသလဲ ကိုဝေလင်းရယ်…